Turkey: Sharci xoojinaya "Ciidanka Ilaalada Xaafadaha" oo lameel mariyay - Tilmaan Media
Dowladda Turkiga ayaa awoodo dheeri ah siisay ciidamada habaynkii hawlgala ee loo yaqaan Ilaalada Xaafadaha (Bekçi) oo jiri jiray xilligii Cusmaaniyiiinta. Arintan ayaa mucaarado lakulantay marka la,eego tobabarka xaddidan ee ciidankan leeyihiin, waxaana jirta cabsi ah in ay gaystaan falal kadhan xuquuqda aadanaha.
Ciidankan oo xiran darays uu ku qorantahay “Gorgoradda Habaynkii”, ayaa waxaa soo nooleeyay madaxwayne Erdogan sanaddii 2017, hal sano kadib inqilaabkii fashlilmay ee Turkgia kadhacay.
Sharicgan oo ay dabada kariixeen xisbiga AKPARTI ee uu hogaamiyo Erdogan ayaa wuxuu ciidamada ilaalada xaafadaha ee habaynkii usuurtagalinayaa inay ogaan karaan haybta qofka, awood iy hub adeegsan karaan isla markaasna xabsiga utaxaabi karaan ruuxa ay ka shakiyaan.
“Qaf 40 maalmood kaliya oo tababar ah haysta, inta hub udhiibtid waddooyinka kuma sii dayn kartid”. Engin Atlay, oo ah mudane katirsan xisbiga mucaaradka ugu wayn ee CHP ayaa sidaas yiri.
Dhanka kale, wasiirka arrimaha gudaha ee Turkiga ayaa diffaacay tallaabada ay dooladdu qaaday isaga oo sheegay in tan iyo markii la sameeyay ciidanka ilaalada xaafadaha ay horseedday hoos udhac %47 oo ku yimid tuugada iyo dhaca guryaha loo gaysto xilliga habaynkii.
Wasiirka ayaa sheegay in ciidankani ay shaqada billaabaan kadib tobabar guud oo saddex bilood ah iyo tobabar shaqo oo labo bilood ah. Sidoo kale wuxuu sheegay in %20 ciidankan ay yihiin dhalinyaro waxbarashadoodu tahay heer jaamacadeed.
Marka la isu geeyo tirada xisbiga madaxwayne Erdogan ee AKPARTY kuleeyhay baaralamanka oo ah 291 oo kamid ah 600 oo uu ka kooban yahay baarlamanka Turkiga iyo 46 xubin oo ka tirsan xisbiga ay xulufada yihiin ee dhanka midig ujanjeera ee MHP, waxaa usuurtagashay in ay si fudud u marsiiyaan sharcigaan baarlamanka dalka.